Endrika vaovao ao amin’ny tondro bridgeblog · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 2:39 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2015)
Vao haingana aho no nampahafantarina ny hevitra “mpamboly wiki “, ireo olona izay mikarakara ny wikis, manafoana ny spam, manamboatra ny endrika sy ny fitsipi-pitenenana, ary amin'ny ankapobeny manadio ny toerana. Vao avy nandany ora vitsy tao amin'ny fanondroana BridgeBlog aho, ary taitra tamin'ny hatsaran'ny fanoharana ny toetoetry ny fambolena. “Namboly” ny hevitra momba ny tondro BridgeBlog izahay volana vitsivitsy lasa izay, ary isaky ny andro vitsivitsy dia misy olona vaovao mitsidika sy manampy bilaogy avy amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao.
Ny lisitra sasantsasany amin'ireo bilaogy izay “naniry” vao haingana:
Ndesanjo Macha, mpanoratra ao amin'ny Jikomboe (amin'ny teny Swahili) sy Digital Africa nandefa lisitra lavabe misy ireo bilaogy Tanzaniana, amin'ny teny Swahili ny ankamaroany. Miezaka miresaka aminy izahay amin'ny fanaovana fitsidihana matetika, ala Ory, ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Swahili.
Misy ireo bilaogy amin'ny taonina ao Bahrain – firenena ahitana olona 670.000 monja, toa manana weblog ny sasany amin'ireo isan-jato maro amin'ny mponina. Tsara hamarinina indrindra – Chan'ad Bahraini, sy Babbling Bahrania.
Rohy vaovao marobe ho an'i Torkia, amin'ny teny Tiorka ny ankamarohany, ary iray na roa ihany no amin'ny teny Anglisy, anisan'izany ny Turkish Torque mahafinaritra.
Miroborobo ny tontolon'ny bilaogy Toniziana, izay bilaogy mavitrika amin'ny teny anglisy, Arabo sy Frantsay. Mikarakara fihaonan'ny bilaogera Toniziana ao Tunis amin'ny 24 Aprily i Subzero Blue, iray amin'ireo bilaogera voalohany ao Tonizia – miandrandra fatratra handre momba izany. Misy ihany koa ireo bilaogy vaovao nalefa tao Singapaoro, Syria, Arabia Saodita sy Ghana – jereo avokoa ireo!
Na dia miha tsara aza ny wiki, dia afaka mampiasa ny fanampianao izy. Raha mahafantatra momba ny andiana bridgebloggers na aiza na aiza manerana izao tontolo izao ianao, dia makà fotoana vetivety mba hidiranao manokana ao amin'ny wiki na andefaso mailaka ho ahy izy ireo, raha manohitra ny wiki ianao (ethanz AT gmail DOT com). Na andefaso ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity izy ireo.